Godfrey Mtimba - VOA Author Bio - Voice of America
Produced by Godfrey Mtimba
Asi meya weguta reMasvingo, VaCollen Maboke, vati kubva pavakapa nzvimbo iyi kuhurumende, hurumende ndiyo yanga ichipa varwere ava chikafu chichibva kuchipatara chikuru cheMasvingo General Hospital.
Vagari vakawanda vemuguta reMasvingo vanoti vari kutadza kubayiwa nhomba yeCoviid-19 sezvo isiri kuwanikwa muguta ravo.
Kanzuru yeMasvingo Pamwe neHurumende Zvoendeswa kuMatare
Vagari vemudhorobha reMasvingo vaendesa kanzuru yavo, bazi rinoona nezvezvicherwa pamwe nemakambani anochera goridhe mashanu mugomo reTarget Kopje, vachikumbira dare kuti rimisemabasa ekucherwa kwegoridhe sezvo ari kukanganisa dzimba dzavo pamwe nematangi emvura.
Hurumende Inoita Musangano neMasangano Akazvimirira kuMasvingo
Mutevederi wasachigaro wemasangano akazvimiririra munyika, reNANGO muMasvingo, Amai Joyce Mhungu, vaudza hurumende kuti isanyanyopindira mumashandiro avo sezvo vane basa rekuva ziso revanhu pamabasa ose anioitwa nehurumende munyika.
Mapurisa Okurudzirwa Kuita Basa neMazvo Munguva yeLockdown
Vanhu vakawanda vanoti vari kushushikana zvikuru nekufa kwakaita vanhu mutsaona yakaitika nezuro mudunhu reMasvingo panguva iyo vanhu vari kurambidzwa kufamba munguva dzemanheru.
Zanu PF Yoramba Ichityora Mitemo yeCovid-19 Pasina Anosungwa
Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, uye vari gurukota rezvehutano, VaConsantino Chiwenga, vakaisa mitemo mitsva munyika inorambidza chero mhando dzipi dzekungano kunze kweparufu panodiwa vanhu makumi matutu, senzira yekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Zimbabwe yabatana neZambia mukuchema mutungamiri wekutanga wenyika iyi, VaKeneth Kaunda, avo vakashaya nezuro vanhu vachiremekedza mabasa akaitwa nemufi achiri mupenyu.
Chikoro cheBondolfi Chinovharwa Zvichitevera Kuputika kweCovid-19
Vagari vemuMasvingo Vanoti Mari yeChirongwa cheKuendesa Masimba Kumatunhu Ngaigadziriswe Dambudziko reMvura
Vamwe vagari vemudhorobha reMasvingo vari kuvira nehasha vachiti vari kushatiriswa nekanzuru yavoniyo iri kuita musangano weStrategic Planning Review muhotera inodhura kuBulawayo.
Vakawanda kuMasvingo Vofara neGoho Asi Vachichema Chema neKudhura Kwoita Zvinhu